for all: December 2008
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:20 AM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:46 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:45 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:42 PM No comments:
သူက သူမလေးကို တကယ်သိပ်ချစ်တာ
တိုက်ခိုက်ရင်းနဲုကက်ဆူပင်တွေ ပျက်စီးခဲ့ဖူးတယ်။ ( တော်တော်ုကီးတဲ့ အပင်တွေုကုံဖူးပေါင် )
သူမ..ချိုးချခဲ့လို့ လူညွန့်တုံးခဲ့ရတယ်။ ( ခိ .. တော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့သူမလေး )
သူမ...က ကလေးလို ရူးရူးတွေပေါက်ချ
ထားခဲ့လို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ နံဟောင် ကျန်ခဲ့တယ်။ ( ခိ.. ညစ်ပါတ်မလေး )
နံလိုက်တာမှ လွန်ရောပဲ။ ( သေချာပြီ ဟိုအပုံပေါ်နားပြီးလာတာဖြစ်မယ်..ခိ )
သူမေုကာင့် လူတွေခဏခဏ ချော်လဲကြရတယ်။ ( သူတို့ ခြေမခိုင်ကြတာကိုများ )
သစ်ကိုင်းကျိုးကျခဲ့ရဖူးတယ်။ ( ရိုးတံရှည်လေးဟာကို သစ်ကိုင်းဖြစ်ရပြန်တယ်)
သူမကိုက်စားသွားလို့ နှလုံးသားတောင် တိုးလှိူပေါက်နေပြီ။
ရေငတ်နေမလားဆိုပြီး အရက် အတူတူ ၀ယ်တိုက်ခဲု့ကဖူးတယ်။ ( ခိ.. အဖိုးတွေက သာဓု..သာဓု..သာဓု..တဲ့ )
ရှေးရေစက် ( ၁၇-၁၁-၂၀၀၈ / ညနေ ၄ နာရီတိတိ )
Posted by mgkikimg@gmail.com at 12:21 AM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 12:07 AM No comments:
အရက် = သာမန်အားဖြင့် ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို နီးစပ်စေသည်။ သို့သော် လင်နဲ့မယားကို ကွဲအောင်လုပ်သည်။
ရန်သူ = ခင်ဗျားအကြောင်း သိလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်း။
ခြွင်းချက် = စည်းကမ်းဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းတဲ့လူတွေရဲ့ အထူးအခွင့်အရေး။
စာပြင်သမား = တခြားလူတွေရဲ့ အမှားပေါ်မှာ ပညာမရှာဘဲ ၀မ်းစာရှာတဲ့သူ။
လက်ဆောင်ပစ္စည်း = လိုအပ်တဲ့လူကို ပေးတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း။
ကဗျာဆရာ = ချစ်တဲ့သူကို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာ ဖိနပ်တစ်ရံတောင် ၀ယ်မပေးနိုင်တဲ့သူ။
သရော်စာရေးသူ = ကိုယ့်ကို ချီးမွမ်းစေချင်တဲ့အတွက် တခြားသူတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြတဲ့လူ။
ကျော်ကြားမှု = ခင်ဗျားမသိတဲ့လူတွေတောင် ခင်ဗျားကို သိနေခြင်း။
ဇရာ(၁) = ဆေးက အစာဖြစ်ပြီး အစာက အဆိပ်ဖြစ်တဲ့အရွယ်။
ဇရာ(၂) = အလုပ်ကြောင့်သာမက အနားယူရင်လည်း ပင်ပန်းတဲ့အရွယ်။
ဇရာ(၃) = သွားကလွဲပြီး အရာခပ်သိမ်း နာတဲ့ အရွယ်။
ခေတ်သစ်သံတမန်(၁) = ကိုယ်ဘာမေးမိသလဲဆိုတာတောင် သတိဖော်မရအောင် ဖြေတတ်တဲ့လူ။
ခေတ်သစ်သံတမန်(၂) = `ခင်ဗျားဘာပြောလိုက်သလဲဟင်´ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို `ကျွန်တော်စဉ်းစားရဦးမယ်´ လို့ ဖြေတဲ့သူ။
ခေတ်သစ်သံတမန်(၃) = Yes or No ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကလွဲရင် ဘာမေးခွန်းကိုမဆို ဖြေနိုင်တဲ့လူ။
ခေတ်သစ်သံတမန်(၄) = ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ လာတဲ့သူကို ပြဿနာသုံးခုနဲ့ ပြန်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့လူ။
ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ = သိတာထက် မှတ်မိတာ ပိုးများတဲ့လူ။
လျှို့ဝှက်ချက် = တိုးတိုးလေးပြောတဲ့ အများသိအကြောင်းအရာ။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 7:07 PM 1 comment:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 7:05 PM No comments:
Ytm.acacia ကကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး ၁၀ချက် ဆိုပြီး tag လာလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ဘယ်မုန်းမလဲ။မကြိုက်တာတွေတော့အများကြီး။ ၁၀ ချက်ကနည်းနေသေးတယ်။ လမ်းကြုံမှ ဂျမ်းပုံမတို့ကိုရှင်းပြမယ်။
အိပ်ချင်လို့ အိပ်နေတာကို အလိုက်မသိလာနှိုးရင်
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:08 PM 1 comment:
Do u knowasimple HELLO can beasweet one ? Especially from our loved ones . The word HELLO means …..
H…..How are you ?
E…..Everyting all right ?
L…..Like to hear from you…
L…..Love to see you soon..
O….Obviously , I miss you …So Hello !!!..Good Day !!!
Posted by mgkikimg@gmail.com at 10:36 AM No comments:
FAMILY ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုသိတယ် ….ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကကော ဘယ်လိုမြင်လဲ ….?
FAMILY = မိသားစု
F = Father ( ဖေဖေ )
A = And ( နှင့် )
M = Mother ( မေမေ )
I = Me ( ကျွန်တော် )
L = Lover ( ကျွန်တော့်ချစ်သူ )
Y = Young ( မျိုးဆက်သစ်များ )
Love ( အချစ် )ဟူသည် … !!!!!
L = Lake of Sorrow ( ၀မ်းနည်းပူဆွေးရေအိုင် )
O = Ocean of Tear ( မျက်ရည် သမုဒ္ဒရာ )
V = Valley of Death ( မရဏတောင်ကြား )
E = End of Live ( ဘ၀နိဂုံး )
Posted by mgkikimg@gmail.com at 10:35 AM No comments:
အလှစိုက်သစ်ပင် ---------- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဦးထုပ် ---------- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
စက္ကူ ကြိုးကြာရုပ် တစ်ထောင် ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
စက္ကူ ရောင်စုံ ကြယ်ပွင့် တစ်ထောင်-------- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
မီးခြစ် ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ပြာခွက် ---- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဒိုင်ယာရီစာအုပ် ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဘောလ်ပင် ----- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ဓာတ်ပုံမှန်ဘောင်လှလှလေး ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
၀ိုင်ပုလင်း ----- မိန်းကလေးမှ ယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
လက်ကိုင်ပုဝါ ----- ယောကျာင်္းလေးမှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
စားပွဲတင်ပြက္ခတိန် ----- မိန်းကလေး မှယောကျာင်္းလေး သို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
အ၀ါရောင်ပန်းပွင့် ပန်းစည်း ----ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
သီချင်းဓာတ်ပြာ အယ်ဘမ်----- မိန်းကလေးမှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ကြည့်မှန်သေး ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
သော့ချိတ်လေး ----- မိန်းကလေးမှယောကျာင်္လေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
လက်စွပ်တစ်ကွင်း ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
လက်ပတ်နာရီ ----- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးဆေး----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
အင်္ကျီ အ၀တ်အစား -----မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လကိဆောင်ပေးရန်
ဖဲ ကြိုးလှလှလေးချည်ထားတဲ့ပန်းစည်း ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
ချောကလက်ဘူး ----- မိန်းကလေး မှ ယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
အမွှေးပွပွ ၀က်ဝံရုပ် ----- ယောကျာင်္းလေး မှ မိန်းကလေးသို့လက်ဆောင်ပေးရန်
ရေမွှေး ပုလင်း ----- မိန်းကလေး မှယောကျာင်္းလေးသို့ လက်ဆောင်ပေးရန်
အစဉ်ပြေချောမွေ့ပါစေ လို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ် Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
မမ pinkgold ရေးထားတာ အားလုံးပဲ ကျေးဇူး
Posted by mgkikimg@gmail.com at 10:42 PM No comments:
စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ စာစီစာရိုက်ဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာတစ်စုံ၊ မိတ္တူကူးစက်တစ်လုံးနဲ့ စတင်မယ်ဆိုရင် ငွေသိန်း၂ဝကစပြီး စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းခမပါပါ။ ဆိုင်ခန်းခအတွက်လည်း ငှားမယ်၊ ဆောက်မယ် ဒါတွေကို ထည့်စဉ်းစားရမှာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာလည်း အသစ်လား၊ အသင့်အတင့်လားဆိုတာ ကိုယ်နိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီး စဉ်းစားရမှာပါ။ ဒီလုပ်ငန်းကိုတော့ အနည်းဆုံးဆိုင်ခန်းခမပါ ၁၅သိန်းနဲ့စတင်ကြပြီး ဆိုင်ခန်းခရော စက်ဖိုးအပါအဝင် ဆိုင်ခန်းအပြင်အဆင်ပါ ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ သိန်း၃ဝဝန်းကျင်လောက်ကုန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တချို့ကလည်း ကွန်ပျူတာခန်းကို အအေးခန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ကြတာမျိုးရှိပါတယ်။ အကြမ်ဖျင်းခြုံပြောရရင်တော့ ငွေ သိန်း၂ဝကနေ ဆိုင်ခန်းအတွက်ပါ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ငွေသိန်း ၅ဝဝန်းကျင်လောက်လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:49 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:44 PM No comments:
ငွေနှစ်သိန်းလောက်နဲ့ စတင်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းခပါ ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ခန်းခအတွက် သီးသန့်ထည့်တွက်ရမှာပါ။ စာအုပ်စင်တွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း ကိုယ်နိုင်ရင်နိုင်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အပိုင်းရှိပါတယ်။ တချို့ စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးတွေမှာဆို စရိတ်စကနည်းတဲ့ ဝါးစင်လေးတွေကိုတောင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ စဖွင့်ဖွင့်ချင်း ဆိုင်ကြီးကြီးနဲ့ စာအုပ်တွေ စုံစုံလင်လင် တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စာအုပ်ဖိုးတင် ငွေသုံးလေးသိန်းရင်းရုံနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။ တချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ ငွေရှစ်သောင်းလောက်နဲ့ စတင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ငွေပင်ငွေရင်း အနည်းငယ်သာသုံးတဲ့ ဆိုင်တွေက စာအုပ်အသစ်တွေထက် တိုက်ကျတွေ၊ စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုသာ ဝယ်ထားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေကို မေးမြန်းကြည့်ရာမှာ အငှားရဆုံးက ကာတွန်းစာအုပ်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ကာတွန်းနဲ့ ရုပ်ပြစာအုပ်တွေမှာလည်း ရုပ်ပုံလှလှပါတဲ့ စာအုပ်တွေက ငှားနေရပြီး စုစုပေါင်း အမျိုးလေးဆယ်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကျပ်၎ဝဝကနေ ကျပ်၁၅ဝဝတန်ထိ ရှိကြပါတယ်။ လက်ရှိ ငှားအားကောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာတော့ လစဉ် ကာတွန်း၊ ရုပ်ပြအမျိုးပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် ပုံမှန်ဝယ်ယူပြီး မဂ္ဂဇင်းကိုလည်း အမျိုးပေါင်း၂ဝလောက် ဝယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ ... လစဉ် ဝယ်ယူရတာပါ။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အနည်းဆုံး ကျပ်၈ဝဝကနေ အများဆုံး ကျပ်၁၅ဝဝထိရှိကြပါတယ်။ ဝတ္ထုမှာတော့ အရောင်းသွက်နေတဲ့ စာရေးဆရာ၁၅ဦးခန့်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေ ဝယ်တင်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကျပ်၁ဝဝဝဝန်းကျင်ကနေ ကျပ်၁၅ဝဝကျော်ထိ ရှိတတ်ကြပါ တယ်။
ဆိုင်စဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ စာအုပ်တွေကို အသစ်တွေသာမက တိုက်ကျလို့ခေါ်တဲ့ လကျော်စာအုပ်တွေကိုပါ ဝယ်တင်ထားရင် စာအုပ်အင်အားများပြီး လာငှားတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ရွေးစရာများစေပါတယ်။ လကျော်စာအုပ်တွေကို ၃၁လမ်းနဲ့ ၃၂လမ်း မှာရှိတဲ့ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွေမှာ မေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်တန်းမှာ တိုက်ကျစာအုပ်တွေအပြင် စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုပါ ဝယ်ယူလို့ရတယ်။ ငွေအလိုက်ထပ်ပေးပြီး ကိုယ့်ဆိုင်က စာအုပ်အဟောင်းနဲ့ အဲဒီအဟောင်းဆိုင်က အဟောင်းကို လဲလှယ်လို့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ စာအုပ်အဟောင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးကလည်း ရုပ်ပြကာတွန်းဆိုရင် တစ်အုပ်ကို ၁၅ဝကျပ်တန်ကနေ ၈ဝဝကျပ်တန်ထိ ရှိပါတယ်။ အသစ်အဟောင်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဈေးကွာသွားတာပါ။ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေမှာလည်း အဟောင်းဆိုရင် အနည်းဆုံး ၂ဝဝကျပ်ကနေ ၈ဝဝကျပ်တန်ထိရှိပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းကတော့ လကျော်ပြီ၊ ဟောင်းပြီဆိုတာနဲ့ တစ်အုပ် ၁ဝဝကျပ်၊ ၂ဝဝကျပ်ဈေး ရှိကြပါတယ်။ စာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ငွေပင်ငွေရင်း တတ်နိုင်တယ် ဆိုရင်လည်း စာအုပ်အဟောင်းဈေးကွက်ကိုတော့ မလေ့လာလို့မရပါဘူး၊။ ကိုယ့်ဆိုင်မှာမရှိသေးတဲ့၊ လူမေးများတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပြန်ရှာဝယ်ပြီး တင်ကြရပါတယ်။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:40 PM No comments:
အများဆုံးလာကြမှာကတော့ ကလေးတွေပါ။ ကာတွန်းစာအုပ်တွေကို များများတင်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ရုပ်ပြစာအုပ်တွေကိုတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကနေ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသမီးတွေ ဖတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုဟာလည်း ရုပ်ပြ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဝတ္ထု အစုံဖတ်ကြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ များများလာတဲ့အငှားဆိုင်ဆိုရင် မရှုံးနိုင်ဘူးလို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။
အရင်းအနှီးနည်းပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ ဆိုကြပါတယ်။ စာအုပ်စာပေဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်လည်း အတွေးအမြင်၊ အသိပညာ တိုးပွားစေပါတယ်။ ၁၉၈ဝပြည့်နှစ်လောက်တုန်းက စာအုပ် အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ အတော့်ကို တွင်ကျယ်လာခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုအငှားဆိုင် လုပ်ငန်းတွေ တွင်ကျယ်လာတဲ့အခါ စာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ ကျသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ စာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ မိသားစုထမင်းအိုးကို ထောက်ပံ့ထားနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ပြောရရင် စာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ ခုထက်ပိုပြီး တွင်ကျယ် ကျယ်ပြန့်သင့်သလို၊ အငှားဆိုင်တွေမှာလည်း သုတ၊ ရသစာအုပ်တွေအပြင် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေပါထားပြီး ငှားရမ်းသင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေးစာအုပ်တွေ၊ စီးပွားရေးစာအုပ်တွေ၊ သုတစာအုပ်တွေ၊ တက်ကျမ်းတွေပါမကျန် စာအုပ်မှန်သမျှ အကုန်တင်မယ်ဆိုရင် လာငှားဖတ်မယ့်သူတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ စာအုပ်အငှားဆိုင်လုပ်ငန်းကို စာကြည့်တိုက်တစ်တိုက်လို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးအတွက်လည်း တွက်ချေကိုက်မှာဖြစ်သလို အများတကာတွေအတွက်လည်း အင်မတန်ကောင်းမွန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:39 PM No comments:
သင်ဗီဒီယို၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီအငှားဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါသလား
အနည်းဆုံး ငွေငါးသိန်းလောက်နဲ့ စတင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပါ။ ဆိုင်ခန်းခမပါဘူးဆိုရင် ငွေငါးသိန်းနဲ့ စလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းငှားခရှိ လာမယ်၊ လမ်းမကြီးဘေးမှာ အပြင်အဆင် ကောင်းကောင်းနဲ့ စဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ သိန်း၂ဝနဲ့ စကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လူနေအိမ်များတဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ သင့်တင့်တဲ့ဆိုင်ခန်းလေးနဲ့၊ သင့်တင့်တဲ့ အပြင် အဆင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ ငွေငါးသိန်းနဲ့ လောက်ငှနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်သုံးဆိုင်ကို မေးကြည့်ရာမှာ တစ်ဆိုင်က ငွေသုံးသိန်းနဲ့ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဖြေကြားပြီး၊ နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ ရှစ်သိန်းလုိ့ ဖြေပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းငှားခ တစ်နှစ်စာ ပါဝင်ပါတယ်။ လှည်းတန်းဈေး အနီးက ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကတော့ တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းနဲ့ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က စခဲ့ပါတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:35 PM No comments:
"ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေနှင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
(၇) ဗီဒီယိုပြသခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီလုပ်ငန်းတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့မှာ လိုင်စင်လျှောက်ထားပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်ရမှ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်နေရာကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုမှ လိုင်စင်လျှောက်ထားလို့ရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်နဲ့ဖွင့်မယ့် မြို့နယ်၊ နေရာနဲ့ ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူစတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ယူပြီး ကိုယ့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စိစစ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီမှာ သွားရောက် ဆက်သွယ် ရပါမယ်။ အဲဒီက တစ်ဆင့် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားတွေ ပူးတွဲပြီး၊ တိုင်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကို ပေးပို့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်္ကဘာလမ်းမှာ ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာပဲ ရုံးခန်းဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
လျှောက်ထားသမျှကို ခွင့်ပြုကြတာများပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ထုတ်လုပ်ရေးဈေးကွက်ဟာ ဗီဒီယိုအငှားဆိုင်လေးတွေပေါ်မှာ တည်မှီနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အငှားဆိုင်လေးတွေ များပြားလာလေ ဇာတ်ကား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်း ဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာ လေပါပဲ။ သည့်အတွက် လျှောက်ထားသမျှ လိုင်စင်အားလုံးလိုလို ခွင့်ပြုတာများ ပါတယ်။ လိုင်စင်မကျသေးခင်မှာ ဆိုင်အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ လိုင်စင်ဟာ အစောဆုံး နှစ်ပတ်အတွင်းကျတတ်ပြီး နောက်အကျဆုံး တစ်လကြာတတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၊ ဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့ကနေ လိုင်စင်လျှောက်သူ ဆိုင်သစ်တွေကို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားဟောင်းခွေ ၅ဝကို တစ်ခွေ နှစ်ထောင်ကျပ်နှုန်းနဲ့ ရောင်းပေးပါတယ်။ စုစုပေါင်းငွေ တစ်သိန်းပေးချေရမှာပါ။ ငွေပေးချေပြီးမှ ခွေ၅ဝ မယူလို့ရပေမယ့်၊ ငွေမချေဘဲနဲ့တော့ နေခွင့်မရှိပါဘူး၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားသူ မှန်သမျှ ခွေဇာတ်ကားဟောင်း ၅ဝကို ငှားရမ်းရန်အတွက် ဝယ်ယူကြရပါတယ်။ ငွေတစ်သိန်းအပါအဝင်၊ စာရွက်စာတမ်းကြေးအပါအဝင် အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ စုစုပေါင်း ငွေတစ်သိန်းသုံးသောင်းကနေ တစ်သိန်းငါးသောင်းအထိ ကုန်ကျတတ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေပြီးမှ လိုင်စင်ကျပြီး လက်ဝယ်လိုင်စင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ဆိုင်စဖွင့်လို့ရပါပြီ။
ဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အခွေစင်တွေ၊ ကြော်ငြာဘုတ်၊ Album တွေ၊ ဆိုင်တံဆိပ်တုံး၊ စတစ်ကာ၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်စတာတွေကိုတော့ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုယ်သုံးစွဲကြတာများ ပါတယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကတော့ ဆိုင်ခန်းငှားခမပါ ဆိုင်အတွက် လိုအပ်တာကစ ပြင်ဆင်စရိတ်ကို တစ်သိန်းသုံးစွဲတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ ခွေစင်ကြီးနှစ်စင်နဲ့ ဆိုင်ခန်းပြင်ဆင် စရိတ်မှာသုံးသိန်း ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆိုင်လုံးမှန်ကာပြီး လေအေးပေးစက်နဲ့ ဆိုင်ကတော့ ဆိုင်ခန်းပြင်ဆင်စရိတ်ချည်းပဲ ဆယ်သိန်းဝန်းကျင် ရှိပါတယ်တဲ့။
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေမှာ တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မတူတာက ခွေဝယ်ယူရေး ကိစ္စပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ဗီဒီယုိုထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ အတိုင်း ခွေငှားဆိုင်တွေက ဝယ်ယူကြရတာပါ။ ဆိုင်စဖွင့်တဲ့နေ့ကစပြီး ခွေစပြီးဝယ်ယူရပါပြီ။ တစ်ပတ်ကို မြန်မာဇာတ်ကား အနည်းဆုံးသုံးကား အထက် ဝယ်ယူကြရပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ဇာတ်ကားပေါင်း ၂ဝခန့်ထွက် ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ကြီးတွေကတော့ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး ဇာတ်ကား ၅ကားကနေ ၇ကားထိ ဝယ်ယူ တတ်ကြပါတယ်။ ခွေငှားဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကတော့ "မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး၊ ဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့ကနေ အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း တစ်ပတ်အတွင်းထွက်ရှိမယ့် ဇာတ်ကား စာရင်းထွက်တယ်၊ အဲဒီ ဇာတ်ကားစာရင်းပါတဲ့ စာရွက်လေးကို 'ရက်ချိတ်' လို့ ခေါ်ကြတာပါ။ အဲဒီ ရက်ချိတ်ထဲကအတိုင်း ဝယ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဈေးနှုန်းဆိုရာမှာ RC ကြေးနဲ့ ခွေတန်ဖိုးပေါ့။ RC ကြေးဆိုတာ ဇာတ်ကားရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကြေးပေါ့။ RC ကြေးက တစ်ကားနဲ့တစ်ကားမတူဘူး ဗျာ့။ မင်းသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဈေးကွာသွားတာ၊ ဥပမာ-ဒွေးဆိုရင် RC ကြေးက ၄၁ဝဝိ၊ ဇာတ်ကားအတွက် ဗီစီဒီ(နှစ်ချပ်) တစ်ခွေဖိုးက ၈ဝဝိဆိုတော့ RC ကြေး+ ခွေဖိုးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၄၉ဝဝိပေါ့ဗျာ။ လွင်မိုးဆိုရင် RC ကြေးက ၃၅ဝဝိပေါ့။ မင်းမော်ကွန်းဆိုရင် RCကြေး က ၃၈ဝဝိပေါ့...အဲဒီလိုပေါ့။ မင်းသား တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး RCကြေးကွာသွား ကြတာ။ နယ်ကြိုက်မင်းသားတွေဆိုရင် RC ကြေးက ၅ဝဝိလောက်ပဲရှိတယ်။ အများဆုံး RC ကြေးက ၄၁ဝဝိပါပဲ၊ အနည်းဆုံး RC ကြေးက ၅ဝဝိပေါ့။ စီဒီ ကတော့ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ၈ဝဝိနဲ့ ဝယ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကတော့ တစ်ပတ်ကို မြန်မာဇာတ်ကား ၅ကားဝယ်တယ်။ တစ်နေ့ ဝင်ငွေဆိုရင် တစ်သောင်းဝန်းကျင် ရှိပါတယ်၊ ပျမ်းမျှပေါ့နော်၊ ကျော်တဲ့နေ့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပိတ်ရက်တွေ ဆိုရင် ပိုငှားရတယ်။ ၅ဝဝဝိလောက်နဲ့ ဝယ်ရတဲ့အခွေကို ငှားခက ၂ဝဝိပဲ။ အရင်း ကျေတဲ့ကားလည်း ကျေတယ်၊ မကျေတဲ့ ကားလည်း မကျေဘူးဗျာ" လို့ ပြောပြခဲ့ပါ တယ်။
လူနေအိမ်စိပ်တဲ့နေရာက အဆင်ပြေဆုံးလုိ့ ပြောကြပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကို ငှားကြည့်လေ့ရှိတဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ အများဆုံးနေထိုင်တတ်ကြတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဖွင့်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုင်အကျယ်အဝန်းအနေနဲ့ကလည်း သိပ်မလိုပါဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်း အတာကို ချုံ့နိုင်ချဲ့နိုင်တဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ ခွေဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ တစ်ဆိုင် သိပ်နီးလွန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ အိမ်ခြေ ၁ဝဝလောက်မှာ ခွေဆိုင်သုံးဆိုင်လောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ စီးပွားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:34 PM No comments:
ခွေငှားဆိုင်ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ခွေပျောက်တဲ့ကိစ္စ၊ ခွေပျက်စီးတဲ့ကိစ္စ စတာတွေကို စဉ်းစားဖို့လိုသလို၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးလို့ဆိုရာမှာ ခွေငှားဆိုင်တစ်ဆိုင်အနေနဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်း ထားမယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းနဲ့ ဆိုင်ရှင်ဆက်ဆံရေး၊ ဝန်ထမ်းနဲ့ ခွေငှားသူ(customer)တွေရဲ့ ဆက်ဆံရေး စတာတွေကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တချို့ ဆိုင်ရှင်တွေက ဆိုင်ကိုဝန်ထမ်း လက်ထဲအပ်ထားတာများရင် ဆိုင်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းဟာ မြင့်သင့်သလောက် မြင့်မလာနိုင်ပါဘူး။ တချို့ဝန်ထမ်းတွေက ခွေငှားသူတွေအပေါ်မှာ စိတ်မရှည်ကြဘူး၊ တစ်ခွေက နှစ်ခွေရှာခိုင်းတဲ့အခါ၊ ကြည့်ပြီးသား အခွေကို ပြန်လဲချင်တဲ့အခါ ငှားသူကို မချေမငံဆက်ဆံတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဆက်ဆံရေးဟာ ဆိုင်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကို လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့ ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းထားတဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလည်း ဦးစီးကြတာတွေ့ ရပါတယ်။ "ခွေလာငှားတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ဆီကို ပိုက်ဆံလာပေးတဲ့ သူတွေပါလားဆိုတဲ့ စိတ်ကို ကျွန်မတင်မကဘူး၊ ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုပါ မွေးခိုင်းပါတယ်။ အမြဲတမ်း custo-merမှန်တယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင် သူတို့တွေကို ပြောပြထားတယ်။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း ခွေလာငှားတဲ့သူတွေ စိတ်ကျေနပ်အောင်၊ စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲလုပ်ပေးတယ်၊ ကိုယ့်ဆိုင်ထဲကို ဝင်ပြီးတဲ့သူဟာ ဘာမှမငှားဘဲ ပြန်ထွက်သွားရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဖောက်သည် သူများဆိုင် ရောက်သွားရင် ကိုယ်ညံ့လို့ပါ" လို့ သီရိမေ ခွေငှားဆိုင်မှ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယိုအငှားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ တစ်နေ့တစ်နေ့ အနည်းဆုံးလူ၅ဝ၊ ၁ဝဝ ကို နာရီပိုင်းလေး ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်ရင် ဒီလုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်တာပဲဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ခွေငှားဆိုင်တစ် ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခွေဆိုင်သုံးလေးဆိုင်ကို အရင်မေးမြန်းလေ့လာပြီးမှ ဖွင့်ပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကိုသိန်းနိုင်ဆိုတာ "မိဘမေတ္တာ" ဆေးဆိုင်လေးထဲမှာ အမြဲ အလုပ်လုပ် နေတတ်တဲ့သူပါ။ သူဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးဆိုင်လေးမှာ နိုင်ငံခြားဆေး အမျိုးမျိုးသာမက မြန်မာဆေးမျိုးစုံလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့ဆိုင်လေးထဲမှာ အများသူငါ အိမ်သုံးဆေးဝါး အဖြစ် ဝယ်ယူသုံးစွဲတတ်ကြတဲ့ အဖျားပျောက်ဆေး၊ အားဆေးမျိုးစုံ၊ ချွဲသလိပ် ပျောက်ဆေးများ၊ အစာအိမ်ဆေးများ၊ နှလုံးဆေး၊ သွေးတိုးဆေးကစ အားလုံး စုံလင်နေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အနည်းငယ်ဝတဲ့ သူ့အတွက်တောင် နေရာ မလောက်ချင်တော့အောင် ဆိုင်ထဲမှာ ဆေးတွေနဲ့ ပြည့်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ရောင်းမြဲ ဝယ်မြဲပါပဲ။
ဆေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကတော့ ကြားရတာ ထူးဆန်းနေ သလိုပါပဲ။ လူအများစုက ဆရာဝန်သာဖြစ်ချင်ပေမယ့် ဆေးရောင်းရတာ ဝါသနာ ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူကတော့ ရှားမှာပါ။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:31 PM No comments:
"ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက လူတွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်သွားတယ်၊ ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင် အဲဒါလေးကို ပီတိဖြစ်တယ်လေ။ ဝမ်းသာတယ်။ ကြည်နူးမိတယ်ပေါ့"
အဲဒါကတော့ ဆေးရောင်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားမှုပါ။ တကယ်တော့ သူဟာ သင်္ဘောသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူပါ။အထက်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက သင်္ဘောလိုက်သွားခဲ့တာပါ။ တစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်ခွဲကြာလိုက် ခဏပြန်နားနေလိုက်၊ မကြာခင် ပြန်လိုက်သွားနဲ့ သင်္ဘော သုံးကြိမ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ချလိုက်ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးပဲ၊ အိမ်ကို လွမ်းတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ သင်္ကြန်လို၊ သီတင်းကျွတ်လို အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ဆိုရင် အိမ်ကို ပြန်လာချင်လွန်းလို့၊ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းလွန်းလို့တဲ့။ အိမ်နဲ့အကြာကြီး မခွဲနိုင်ဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ သူလုပ်ချင်တဲ့ ဆေးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ သင်္ဘောပေါ်မှာတုန်းကလည်း သူက ဆေးမှူးတာဝန်ကို ယူခဲ့ရသူပါ။ ဆေးဝါးတွေနဲ့ သူဟာ စိမ်းမနေပါဘူး။ စိမ်းမနေတဲ့အပြင် ဝါသနာအလျောက် လေ့လာ ထားတာတွေလည်း ရှိတော့ သူနဲ့အဆင်အပြေဆုံးပါပဲလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သင်္ဘောသားတချို့၊ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ သူတချို့ဟာ အိမ်ပြန်ပြီး ဘာပြန်လုပ်ရမှာလဲ၊ ဒီမှာ ဘာစီးပွားရေး လုပ်လို့ကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာကို တွေဝေတွန့်ဆုတ်တတ်ကြစမြဲပါ။ သူကတော့ သူလုပ်ချင်ရာကို လုပ်ဖို့အတွက် သတ္တိကောင်းသူပါပဲ။ ဆေးဝါး အရောင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို မဟာ ဗန္ဓုလလမ်းမကြီးနဲ့ လမ်း၎ဝထောင့်၊ အမှတ် (၃၃၇)မှာ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ "မိဘမေတ္တာ" လို့လည်း အမည်တပ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ ဆေးဆိုင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မခက်ခဲလှပါဘူး။ ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာလည်း သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူရှိပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်နဲ့ စဖွင့်လို့ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးထဲမှာ ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ခန်းခမပါ ငွေသုံးသိန်းလောက်နဲ့ စလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ မြို့နယ်တစ်ခုရဲ့ လမ်းမတန်းဘက်မှာ ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ခန်းခ မပါ ခုနစ်သိန်း၊ ရှစ်သိန်းလောက်နဲ့ အလုပ် စနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍များ မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ခန်းခမပါ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်တော့ ရင်းကြရမှာပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရင်းချင်သလောက်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလို့ ရပါတယ်။ လိုအပ်တာက သင်ကိုယ်တိုင် ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဖော်ပြတဲ့ လက်မှတ်တစ်ခုခု ရှိဖို့ပါပဲ။
အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူ၊ ဘွဲ့ရ သို့မဟုတ် အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ၊ ဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရထားပြီးသူ ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ သင်လည်း ကိုသိန်းနိုင်လို ဆေးဆိုင်ဖွင့် နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆေးဝါးဈေးကွက်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆေးဝါးဖြန့်ချိရေး ကုမ္ပဏီပေါင်း၂ဝဝကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆေးဝါးတွေကိုပဲ အတင်စနစ်၊ အထားစနစ်၊ လက်ငင်းစနစ်စတဲ့ စနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝယ်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် မင်္ဂလာဈေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးစတဲ့ ဆေးဝါးလက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူရမှာပါ။ ဆေးဝါးတွေကလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေက ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဆေးဝါးတွေအပြင် ဘီပီအိုင်က MPF နဲ့၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါးတွေကိုလည်း စုံလင်အောင် တင်ထားနိုင်ရင်တော့ စတင်လို့ရပါပြီ။ သတိထားရမှာက ဆေးဝါးဈေးကွက်မှာ ဆေးဈေးနှုန်းတွေ အတက်အကျ မတည်ငြိမ်နိုင်တာကြောင့် ဈေးကွက်ကို လေ့လာဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
"ကျွန်တော်ကတော့ ဆေးရောင်းရတာ၊ ဆေးပေးရတာ ဝါသနာပါလို့လား မသိဘူး ဒီအလုပ်ကို သဘောကျတယ်ဗျာ့၊ လူတွေကိုလည်း တကယ့်ကို စေတနာနဲ့ ဆက်ဆံဖြစ်တယ်၊ ဆေးတွေဆိုရင်လည်း အမြတ်အစွန်းနည်းနည်းပဲ ယူတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုင်မှာ ဖောက်သည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် တခြား ဘယ်ဆိုင်မှ မသွားတော့ဘူး" လို့ ကိုသိန်းနိုင်က ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပြောပြချက်တွေထဲမှာ သူ့အလုပ်ကို သူတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့ သဘောတရားတွေ ပါဝင်နေတာကို ရိပ်စားမိပါတယ်။ သူဟာ ဆေးသုံးစွဲသူတွေရဲ့ အခြေအနေကို အမြဲဂရုတစိုက်နဲ့ လေ့လာတတ်တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးဝါးဈေးနှုန်းတက်လာလို့ သုံးစွဲသူတွေ ဈေးနှုန်းဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတော့ဘူး ဆိုရင် သူက ဆေးကုမ္ပဏီတွေကို သူနဲ့ဖောက်သည်တွေအကြောင်း၊ ဈေးဝယ်တွေ အကြောင်းပြောပြပြီး ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဆေးကုမ္ပဏီတွေက ဈေးနှုန်းချပေး လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ဆေးရောင်းနေတော့ တာပါပဲ။
"ဆေးတွေ ဈေးကျပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းလို့ဝယ်လို့လည်း ကောင်းတယ်၊ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း ပျော်တယ်" တဲ့။
သင်ကော ကိုသိန်းနိုင်လို ဆေးဆိုင် တစ်ဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါသလား။
Posted by mgkikimg@gmail.com at 2:30 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 10:56 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 10:54 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 12:58 AM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 12:55 AM No comments:
အရှိကို အရှိတိုင်းသာ ဖွင့်ပြောမည် မြင်မြင်ချင်း မင်းကို ချစ်သွားသည်
ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အသည်းကို အရှုံးပေးခဲ့ရ ဒါအချစ်ပဲလား စိတ်မှာ မောသည်
နားလည်မှု တံခါးတွေ ဖွင့်ထားသည်
အကြင်နာ စကားလေးတွေ မျက်ဝန်းဆီ
ပိုင်ရှင်မဲ့ အချစ်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီ
ကိုယ် ... မညာတော့ဘူး မင်းကို ချစ်သည်
မင်း ပြုံးလိုက်ရင်လည်း အိပ်မက်တွေ အထိပဲ လိုက်နှောက်ယှက်သည်
အိပ်မက်ထဲမှာလို ဘယ်အချိန်ပဲ ကြည့်ကြည့် ပြန်တွေးတိုင်း ရင်ခုန်လာသည်
ချစ်သူလေး ရှိရာ ဟို ... အဝေးဆီ လာရာ လမ်းလေးကို မျှော်တတ်ပြီ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဘ၀ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီ ကိုယ် ... မညာတော့ဘူး မင်းကို ချစ်သည်
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:29 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:24 PM No comments:
Posted by mgkikimg@gmail.com at 11:14 PM No comments: